အဆိုပါချည်မျှင်ထုတ်လုပ်ရေး၏သမိုင်း: Making အထည်အလိပ်
ချည်မျှင်နှင့်အထည်, ဒါမှမဟုတ်အထည်နှင့်ထည်ပစ္စည်းများများ၏ဖန်တီးမှု, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါနေသော်လည်း အဝတ်အစား၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၌ကြီးသောတိုးတက်လာ နေဆဲဤသည်နေ့ရက်သဘာဝချည်မျှင်နှင့်အထည်များ၏ဖန်တီးမှုကြိုးများနှင့်ထည်မှထို့နောက်ကြိုးသို့ဖိုင်ဘာ၏ထိရောက်သောပြောင်းလဲခြင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကဲ့သို့သော, တူညီတဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့ကြရသောအထည်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လေးမူလတန်းအဆင့်များရှိပါသည်။
ဒုတိယ carding နှင့်ချည်သို့ spinning ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအထည်စချည်မျိုးကိုရက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, စတုတ္ထအဝတ်စအထည်ဖက်ရှင်နဲ့ချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအစာနှင့်အမိုးအကာများကဲ့သို့ပင်, အဝတ်အစား ရှင်သန်မှုများအတွက်အခြေခံလူ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေချ Neolithic ယဉ်ကျေးမှုတိရိစ္ဆာန်ဟာရှသားရေကိုကျော်ယက်အမျှင်၏အားသာချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ, အထည်များချမှတ်ခြင်းတည်ဆဲ basketry နည်းစနစ်အပေါ်ဆွဲလူသားရဲ့အခြေခံနည်းပညာများတစ်ဦးအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အစောဆုံးလက်-ကျင်းပဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ distaff နှင့်အခြေခံလက်ရက်ကန်းစင်ကနေမြင့်မား automated ချည်ငင်စက်နှင့် ပါဝါရက်ကန်း သည်ယနေ့၏, အထည်သို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျှင်လှည်၏အခြေခံမူစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေဆဲပြီအပင်စိုက်ပျိုးနှင့်ဖိုင်ဘာရိတ်သိမ်းကြသည်။ အဆိုပါအမျှင်သန့်စင်ခြင်းနှင့် aligned, ထို့နောက်ကြိုးသို့မဟုတ်ချည်သို့ပတ်ချာလည်နေကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်မျှင်အထည်ထုတ်လုပ်ရန် interwoven နေကြသည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်လည်းလည် ရှုပ်ထွေးဒြပ်အမျှင် , ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲဝါဂွမ်းနှင့်အပိုက်ဆန်ထောင်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ခဲ့ကြသည်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်စဉ်ကို အသုံးပြု. အတူတကွယက်နေကြပါတယ်။
1. Pick: ရှေးခယျြမှု၏ဖိုင်ဘာပြီးနောက်နောက်တော်သို့လိုက်သောဖြစ်စဉ်ကိုခဲ့ပါတယ်ကောက်နေ, ရိတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာကနေဖယ်ရှားနိုင်ငံခြားကိစ္စ (အမှိုက်, အင်းဆက်ပိုးမွှား, အရွက်, မျိုးစပါး) ကောက်နေ။ အစောပိုင်းခူးဆွတ်သူတို့ကိုလျှော့ပေးရေးဖို့အမျှင်ရိုက်နှက်နှင့်လက်ဖြင့်အပျက်အစီးဖယ်ရှားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့စက်ကဒ်ကိုအဆင်သင့်နေတဲ့ပါးလွှာတဲ့ "ရင်ခွင်" ကိုထုတ်လုပ်အလုပ်လုပ်ဖို့အလှည့်အံသွားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
2. card ကို: ကဒ်အမျှင်တစ်ဦးကိုခေါ်နေတဲ့ချောင်ကြိုးသို့သူတို့ကိုငါ align နှင့် join ဖို့ combed ခဲ့ကြသည်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကို "အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခု။ " လက် carders ပျဉ်ပြားအတွက်သတ်မှတ်ထားဝါယာကြိုးသွားများအကြားရှိအမျှင်ဆွဲ။ စက်ဆလင်ဒါလှည့်နှင့်အတူတူညီသောအရာလုပ်ဖို့တီထွင်မည်ဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခု (ရေငုပ်သမားတွေနဲ့ Rhymes) ထို့နောက်ပေါင်းစပ်လိမ်နှင့်ထဲသို့ထုတ်ခံခဲ့ရသည် "roving ။ "
3. ဗိုင်းငင်ခြင်း။ created အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုနှင့် roving carding ပြီးနောက်, ဗိုင်းငင်လိမ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဆွဲငင်သည့် roving နှင့် bobbin အပေါ်ရရှိလာတဲ့ကြိုးအနာကြောင်းကိုဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကချည်ငင်ဘီးအော်ပရေတာလက်ဖြင့်ဝါဂွမ်းမှထွက်ဆွဲငင်။ roller ၏တစ်ဦးကစီးရီး "throstles" နှင့်ခေါ်တော်မူစက်တွေပေါ်မှာဤစကားပြည့်စုံ "spinning လား။ "
4. အတိုင်: အတိုင် bobbins ၏နံပါတ်ထံမှမျှင်ကိုစုဝေးစေနှင့်သူတို့တစ် reel သို့မဟုတ် spool အပေါ်အတူတကွပိတ်ဖို့အနာ။ ထိုအရပ်မှသူတို့ထို့နောက်ရက်ကန်းစင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သောတစ်ဦးအတိုင်ရောင်ခြည်, ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ အတိုင်ချည်ရက်ကန်းစင်ပေါ်တွင်အလျားအထဲသို့ပြေး ဝင်. သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။
5. ယက်လုပ်ခြင်း: ယက်လုပ်ခြင်းအထည်အလိပ်များနှင့်အထည်အောင်အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ crosswise woof ချည်တစ်ရက်ကန်းစင်အပေါ်အတိုင်ချည်နှင့်အတူ interwoven ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက 19 ရာစုမှအာဏာကိုရက်ကန်းစင်က၎င်း၏လုပ်ရပ်များအများကြီးပိုမြန်ထို့ကြောင့်စက်မှုလယ်ယာခဲ့ကြသည်နှင့်အကြောင်း မှလွဲ. တစ်ဦးလက်ရက်ကန်းစင်များကဲ့သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အကြီးစားဗီဒီယိုပြရန် - Jumbotron
နာမည်ကြီးတီထွင်မှု: Z ကိုမှတစ်ဦးက
အမ်မလီနှင့် Zooey Deschanel ၏မျိုးရိုး
ခုနှစျတှငျမှာတွင်, နှင့်ရန်: အခြေခံပညာအင်္ဂလိပ်အချိန်နှင့်နေရာများ၏ preposition
ယူအက်စ်အေမသန်စွမ်း fundar un negocio (startup) en 8 caminos မသန်စွမ်း obtener ဗီဇာ
အိပ်ဆောင်ကိုရွှေ့-ခုနှစ်တွင်နေ့ပိုလွယ် Make9သိကောင်းစရာများ
ကဒ်များ Playing တစ်အလှဆင်အတွက်4suite ၏မူလအစဟာဘာလဲ,
ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို Keikaku အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ဂျူလီ Andrews က "ကျနော့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာ" (AARP ဗားရှင်း)
ဗဟို Connecticut ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
မူပိုင်ပြီးတော့ USPTO မူပိုင်ခွင့် Applications ကိုရန်ကိုလမ်းညွှန်
MSNBC ရဲ့ Hardball ၏က Chris Matthews က၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
ရှမွေလသည်ပြင်သစ် Inc မှ .: ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီ Play
နကျယ်ကောင် vs. ပျား: ကွာခြားချက်များနှင့်အလားတူ
ထိပ်တန်း 10 Baroque Period တေးရေးဆရာ
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အခက်အခဲများကို Remove5ဂုရုကြီးများ၏5Shabads
ဂေါက်၏စည်းကမ်းများ - နည်းဥပဒေ 3: လေဖြတ် Play စ
Battlestar Galactica Cast ကို: အ Cylons သိရယူခြင်း